समाचार - के एक खेल मनिटर मा हेर्न को लागी
सार्वजनिक अवलोकन मनिटर
MM27 श्रृंखला वक्र
YM32 श्रृंखला वक्र
गेमि G मोनिटरमा के हेर्ने हो
गेमरहरू, विशेष गरी हार्डकोरहरू, धेरै सावधानीपूर्वक जीवहरू हुन्, विशेष गरी जब यो गेम रेगको लागि उत्तम मोनिटर छनौट गर्न आउँदछ। त्यसोभए वरपर किनमेल गर्दा उनीहरू के हेर्छन्?
आकार र रिजोलुसन
यी दुई पक्षहरू सँगसँगै जान्छन् र मोनिटर किन्नु अघि प्रायः पहिलो विचार गरिन्छ। एक ठूलो स्क्रीन निश्चित रूप मा राम्रो छ जब तपाइँ खेल को बारे मा कुरा। यदि कोठाले यसलाई अनुमति दिईयो भने, ती २ eye इनचरको लागि अप्ट इन गर्नुहोस् ती आँखा-पपिंग ग्राफिक्सहरूको लागि धेरै रियल ईस्टेट प्रदान गर्न।
तर ठूलो स्क्रिन राम्रो हुने छैन यदि यसको क्रिप्पी रिजोलुसन छ। कम से कम १ HD ०० x 1080 p० पिक्सेल अधिकतम रिजोलुसनको साथ पूर्ण HD (उच्च परिभाषा) स्क्रिनको लागि लक्ष्य राख्नुहोस्। केही नयाँ २-इन्च मोनिटरहरूले वाइड क्वाड हाई डेफिनिशन (WQHD) वा २6060० x १4040० पिक्सल प्रस्ताव गर्छन्। यदि खेल, र तपाइँको गेम्स रिग, WQHD समर्थन गर्दछ, तपाइँ पूर्ण HD भन्दा राम्रो ग्राफिक्स को उपचार हुनेछ। यदि पैसा एक मुद्दा हैन भने, तपाईं अल्ट्रा हाई डेफिनिशन (UHD) मा पनि जान सक्नुहुन्छ 38 3840० x २१60० पिक्सेल ग्राफिक्स महिमा। तपाईं १ aspect: of को एस्पेक्ट रेशियो र २१: with को साथ एक साथ स्क्रीन पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
ताजा दर र पिक्सेल प्रतिक्रिया
पुन: ताजा दर एक मोनिटर एक सेकेन्डमा स्क्रिन redraw गर्न कति पटक लिन्छ। यो हर्ट्ज (हर्ट्ज) मा मापन गरिएको छ र अधिक संख्याको मतलब कम धमिलो छविहरू। सामान्य प्रयोगका लागि धेरै मोनिटरहरूलाई H० हर्ट्जमा दर्जा दिइन्छ जुन राम्रो छ यदि तपाईं अफिसको सामानहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने। गेमि कम्तिमा १२० हर्ट्जको छिटो छवि प्रतिक्रियाको लागि माग गर्दछ र यो एक शर्त हो यदि तपाईं थ्रीडी खेलहरू खेल्ने योजना बनाउनुहुन्छ। तपाईं G-Sync र FreeSync द्वारा सुसज्जित मॉनिटरहरूको लागि पनि अप्ट इन गर्न सक्नुहुनेछ जुन समर्थित ग्राफिक्स कार्डको साथ समन्वयन प्रस्ताव गर्दछ यसले स्फूर्तिदायी गेमि experience अनुभवको लागि भेरिएबल रिफ्रेस रेटहरूलाई अनुमति दिन्छ। G-Sync लाई Nvidia- आधारित ग्राफिक्स कार्ड चाहिन्छ जबकि FreeSync AMD द्वारा समर्थित छ।
मोनिटरको पिक्सेल प्रतिक्रिया समय हो जुन पिक्सेल कालोबाट सेतोमा सेतो वा खैरो र oneको छायाबाट अर्कोमा सारिन सक्छ। यो मिलिसेकेन्डमा मापन गरिएको छ र कम स the्ख्याहरू छिटो पिक्सल प्रतिक्रिया हो। एक द्रुत पिक्सेल प्रतिक्रिया मनीटरमा प्रदर्शित छिटो गतिशील छविहरूको कारण भूत पिक्सेलहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ जुन चिकनी तस्वीरमा जान्छ। गेमि forको लागि आदर्श पिक्सेल प्रतिक्रिया २ मिलिसेकेन्ड हो तर mill मिलिसेकेन्ड ठीक हुनुपर्छ।
प्यानल टेक्नोलोजी, भिडियो इनपुटहरू, र अन्य
ट्विस्टेड नेमाटिक वा टीएन प्यानलहरू सबैभन्दा सस्तो हो र उनीहरूले द्रुत रिफ्रेस रेटहरू र पिक्सेल प्रतिक्रिया प्रस्ताव गर्छन् जुन उनीहरूलाई खेलका लागि उत्तम बनाउँदछ। यद्यपि तिनीहरू चौडा दृश्य कोणहरू प्रदान गर्दैन। ठाडो पign्क्तिबद्ध वा VA र इन-प्लेन स्विचिंग (IPS) प्यानलहरूले उच्च कन्ट्रास्टहरू, शानदार र color्ग र विस्तृत दृश्य कोणहरू प्रस्ताव गर्न सक्दछन् तर भूत छविहरू र गति कलाकृतिहरूको लागि अति संवेदनशील छन्।
यदि तपाईं कन्सोलहरू र पीसीहरू जस्तै बहु गेम फर्म्याटहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने बहु भिडियो इनपुटहरूको साथ एक मोनिटर उत्तम हो। मल्टिपल HDMI पोर्टहरू उत्तम हो यदि तपाईंलाई बहु भिडियो स्रोतहरू जस्तै तपाईंको होम थियेटर, तपाईंको खेल कन्सोल, वा तपाईंको गेमिंग रिगको बीचमा स्विच गर्न आवश्यक पर्दछ भने। डिस्प्ले पोर्ट पनि उपलब्ध छ यदि तपाईंको मोनिटरले G-Sync वा FreeSync लाई समर्थन गर्दछ।
केही मोनिटरसँग यूएसबी पोर्टहरू सीधा फिल्म प्ले गर्नका साथै स्पिकरहरू अधिक भ्यूमरका साथ अधिक पूर्ण गेमिंग प्रणालीको लागि हुन्छ।
कुन आकारको कम्प्यूटर मोनिटर उत्तम हो?
यो धेरै तपाईं लक्ष्यीकरण गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंसँग कति डेस्क ठाउँ छ भन्ने रिजोलुसनमा निर्भर गर्दछ। ठूलो भएमा अझ राम्रो देखिन्छ, तपाईंलाई कामको लागि अधिक स्क्रीन स्थान र खेल र फिल्महरूको लागि ठूला छविहरू दिँदै, उनीहरूले प्रविष्टि-स्तर रिजोलुसनहरू तन्काउन सक्छन् 1080p तिनीहरूको स्पष्टताको सीमामा। ठूला पर्दा पनि तपाइँको डेस्क मा अधिक कोठाको आवश्यकता छ, त्यसैले हामी सावधान गर्छौं JM34-WQHD100HZ जस्तै एक विशाल अल्ट्रावाइड खरीद को उत्पादन को सूची मा यदि तपाइँ काम गर्दै हुनुहुन्छ वा एक ठूलो डेस्कमा खेलिरहनु भएको छ भने।
औंठाको द्रुत नियमको रूपमा, १p०p लगभग २ inches इन्च सम्म राम्रो देखिन्छ, जबकि १4040० पी राम्रो देखिन्छ र inches० इन्च भन्दा टाढा। हामी २4इन्च भन्दा सानो कुनै KK स्क्रिनको सिफारिस गर्दैनौं किनकि तपाईं त्यो पिक्सलको वास्तविक लाभ देख्न सक्नुहुन्न जुन त्यो रिजोल्युसनले तुलनात्मक रूपमा सानो स्थान हो।
के 4K मोनिटरहरू गेमिंगका लागि राम्रो छन्?
तिनीहरू हुन सक्छन्। 4K ले गेमि detail्ग डिटेलको शिखर प्रदान गर्दछ र वायुमंडलीय खेलहरूमा तपाईंलाई विसर्जनको पूरै नयाँ स्तर दिन सक्छ विशेष गरी ठूला डिस्प्लेहरूमा जुन ती सबै पिक्सेलको समूहलाई उनीहरूको महिमामा पूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न सक्दछ। यी उच्च रिजोलुशन प्रदर्शनहरूले खेलहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दछ जहाँ फ्रेम रेटहरू दृश्य स्पष्टताको रूपमा महत्त्वपूर्ण छैनन्। त्योले भन्यो, हामीलाई लाग्छ कि उच्च ताजा दर मोनिटरहरूले राम्रो अनुभव (खास गरी शूटरहरू जस्ता द्रुत गतिमा खेलहरूमा) डेलिभर गर्न सक्दछन्, र जबसम्म तपाईंसँग एक शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड वा दुईमा छिटो गहिरो जेब छैन, तपाईं हुनुहुन्न। 4K मा ती फ्रेम दरहरू प्राप्त गर्न जाँदै। २ 27 इन्च, १4040० पी अझै पनी मिठाईको स्थान प्रदर्शन गर्दछ।
यो पनि ध्यानमा राख्नुहोस् मोनिटर प्रदर्शन अब प्राय: फ्रेमस्टेट प्रबन्धन टेक्नोलोजी जस्तै फ्रीसिन्क र जी-सिंकसँग जोडिएको छ, त्यसैले यी प्रविधि र उपयुक्त ग्राफिक्स कार्डहरूको लागि हेर्नुहोस् जब गेमि monitor मोनिटर निर्णय लिन्छ। फ्रीसिन्क AMD ग्राफिक्स कार्डहरूको लागि हो, जबकि G-Sync ले Nvidia को GPU सँग मात्र काम गर्दछ।
कुन राम्रो छ: LCD वा LED?
छोटो उत्तर ती दुबै उही हुन्। लामो उत्तर यो हो कि यो कम्पनीको मार्केटिंगको विफलता हो कि यसको उत्पादनहरू के हुन् भनेर ठीकसँग बताउँदछ। आज अधिकांश मोनिटरहरू जसले एलसीडी टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्छन् एलईडीको साथ ब्याकलिट हुन्, सामान्यतया यदि तपाईं मोनिटर खरीद गर्दै हुनुहुन्छ भने यो दुबै एलसीडी र एलईडी प्रदर्शन हो। LCD र LED प्रविधिको बारे थप विवरणको लागि हामीसँग पूरा गाइड यसमा समर्पित छ।
त्योले भन्यो, त्यहाँ विचार गर्न OLED डिस्प्लेहरू छन्, यद्यपि यी प्यानलहरूले डेस्कटप बजारमा प्रभाव पार्न सकेको छैन। OLED स्क्रीनहरूले एकल प्यानलमा र color र प्रकाश संयोजन गर्दछ, यसको जीवन्त र colors्ग र कन्ट्रास्ट अनुपातको लागि प्रख्यात। जबकि त्यो टेक्नोलोजीले केही वर्षको लागि टेलिभिजनमा छालहरू बनाइरहेको छ, तिनीहरू केवल डेस्कटप मोनिटरहरूको विश्वमा टेन्डेटिभ कदम चाल्न लागिरहेका छन्।
कस्तो प्रकारको मोनिटर तपाईंको आँखाको लागि उत्तम हो?
यदि तपाईं आँखा तनावबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने, मोनिटरहरू खोज्नुहोस् जुन अन्तर्निर्मित लाइट फिल्टर सफ्टवेयर, विशेष रूपमा फिल्टरहरू जुन आँखा समस्याहरू सहज बनाउनका लागि डिजाइन गरिएको हो। यी फिल्टरहरू अधिक निलो बत्ती रोक्नको लागि डिजाइन गरिएको हो, जुन स्पेक्ट्रमको अंश हो जसले हाम्रो आँखालाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित गर्दछ र अधिक आँखा तनाव समस्याहरूको लागि जिम्मेवार छ। यद्यपि, तपाईले प्राप्त गर्नुभएको कुनै पनि प्रकारको मोनिटरका लागि आई फिल्टर सफ्टवेयर अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
उत्तम प्रदर्शन टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
फोन: ०868686-7555-२7070859.२